सङ्घीयता अनुरुप समयमै कानुन, कार्यान्वयनमा किन ढिलाई ?
Sat, Feb 22, 2020 at 9:32pm
मंगलवार, १४ फागुन २०७५,	कालिका खड्का .
तीनै तहको निर्वाचन सम्पन्न भए पनि सङ्घीयता अनुरुप कानून नहुँदा काम गर्न समस्या देखापर्यो । ‘कानून निर्माण वर्ष–२०७५’ नै घोषणा गरेर सरकार कानून तर्जुमा गर्न लागिपरेको हो । “कानून निर्माणमा यो ऐतिहासिक वर्ष हो” कानून, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले भन्नुभयो – “यति धेरै कानून नेपालको इतिहासमै यसअघि कहिल्यै बनेका थिएनन् ।”
‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ बनाउने राष्ट्रिय अभियानअनुरुप मन्त्रालयले कानून निर्माण गरेको छ । ती कानूनले जनतालाई आफ्ना अधिकार उपभोग गर्न सहयोग पुर्याएको छ । “नेपालको संविधान र सङ्घीयताअनुरुप बनाइनुपर्ने कानूनहरु समयमा बन्नु सकरात्मक कुरा हो,” नेपाल बार एशोसिशनका अध्यक्ष तथा वरिष्ठ अधिवक्ता शेरबहादुर केसीले भन्नुभयो – “संविधानले दिएको अधिकारबाट नागरिक विमुख हुनु हुँदैन ।” उहाँले नागरिकको प्रत्यक्ष हकसँग जोडिएका मौलिक हक र अन्य कानूनहरु समयसीमाभित्र बन्न सकेमा न्याय दिलाउन सहज हुने उल्लेख गर्नुभयो ।
यो वर्ष आयोगको ऐनलाई संशोधन गरी पदाधिकारीको समय सकिए पनि आयोग जीवित रहने व्यवस्था गरिएको छ ।
सङ्घसँग नबाझिने गरी प्रदेश सरकारले कानून बनाउनुपर्ने हुन्छ भने सङ्घ र प्रदेश दुबैसँग नबाझिने गरी स्थानीय तहले कानून बनाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ ।